Ndị Gọvanọ Ndịda na-atụ aro ụzọ 10 maka enweghị nchebe
Politics Nwere ike 12, 2021
Gọvanọ Godwin Obaseki nke Edo, Dapo Abiodun nke Ogun, Akwa Ibom osote gọvanọ, Moses Ekpo; Gọvanọ Willie Obiano nke Anambra, Douye Diri nke Bayelsa, EbonyiDavid Omahi, Kayode Fayemi nke Ekiti, Rotimi Akeredolu, Onye isi oche, Southern Governors Forum na Gọvanọ nke Ondo, Rotimi Akeredolu; Senator
… Ndị ndida Naịjirịa ekwetala igbochi ịta nri n'efu
Kpọọ oku maka mkparịta ụka nke mba
… Nọsie ike n'ọkwa gọọmentị etiti rate Rịghachịla ndị otu ndịda ndida inyefe njikọ Naịjirịa
Gosipụta afọ ojuju gị na gridlock n'okporo ụzọ awara awara Oshodi-Apapa
… Buhari akwadoro iwu nchekwa ọhụrụ maka South-East na South-South
… A gaghịzi eme ka ndị mmadụ mata atụmatụ agha — NSA
AND PANDEF na-adụ ọdụ FG ịghara ịhọtara ndị ọzọ ihe ha chọrọ ime.
N’ichebe onwe ya banyere ụkọ enweghị nchekwa nke ala anyị, ndị gọvanọ ndị Gọvanọ zukọrọ ụnyaahụ n’Asaba, isi obodo Delta Steeti, ma kpọkuo onye isi ala bụ Muhammadu Buhari ka ọ gwa ndị obodo okwu a.
Enwere ike icheta na ndị gọvanọ iri na asaa nke ndị South zutere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu gara aga n’okpuru nlekọta nke ndị gọvanọ Southern Governors Forum, mgbe Nzukọ ahụ na-ehi ụra ruo ọtụtụ afọ.
Gọvanọ Ifeanyi Okowa nke Delta, Okezie Ikpeazu nke Abia, Willy Obianọ nke Anambra, Douye Diri nke Bayelsa, Godwin Obaseki nke Edo, na David Umahi nke Ebonyi so na ndị bịara ya.
Ifeanyi Ugwuanyi nke Enugu, Kayode Fayemi nke Ekiti, Babajide Sanwo-Olu nke Lagos, Dapo Abiodun nke Ogun, Rotimi Akeredolu nke Ondo, Seyi Makinde nke Oyo, na Nyesom Wike nke Osimiri dị n'etiti ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na osote ya, Prof Placid Njoku, na Akwa- nọchitere anya gọvanọ Imo Hope Uzodimma.Ibom Gọvanọ Udom Emmanuel nke onye nọchitere anya ya bụ Mazi Moses Ekpo, ndị gọvanọ Gboyega Oyetola nke Osun na Ben Ayade nke Cross River States anọghị.
Ndị gọvanọ ahụ zukọrọ n'otu ụbọchị ahụ onyeisiala Muhammadu Buhari zutere ndị isi ọrụ na ndị isi nke ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ nke ugboro atọ n’ime izu abụọ, ma kwado usoro nchekwa ọhụrụ iji lụsoo enweghị nchekwa na mpaghara South-East na South-South geopolitical zones.
'Ugbu a bụ oge ịkpọkọta mkparịta ụka mba.'
Na-ebili site na ogbako a, nke malitere n’etiti ehihie wee kwụsị n’ihe dịka elekere 4:20 nke mgbede, ndị gọvanọ ndịda South gbara Gọọmentị etiti ume ka ha kpọọ mkparịta ụka nke mba ozigbo ma kwusi ike na amachibidoro ịta nri na Southern Nigeria.
Ha gosiputara nchegbu banyere ụzọ na-aga n'ihu n'okporo ụzọ Oshodi - Apapa Expressway na mkpagbu o nwere na akụ na ụba mba dịka naanị ụzọ ọpụpụ si Apapa Wharf.
Ndị gọvanọ ahụ “kwenyesiri ike na ndị bi na Southern Nigeria na-anọgide na-etinye aka na ịdị n’otu nke Nigeria na-adabere na ikpe ziri ezi, ịkwụ ụgwọ, ịha nhatanha, na ịdị n’otu, na ịdị n’udo dị n’etiti na n’etiti ndị obodo ya, na-elekwasị anya n’inweta ebumnuche ndị ọzọ. maka mmepe akụ na ụba, ”dị ka nkwupụta okwu 12 sitere na onye isi oche nke ndị gọvanọ Southern Governors Forum na gọvanọ nke Ondo State, Oluwarotimi gụrụ. Akeredolu.
Nkwupụta ahụ gụrụ, sị: “Ndị gọvanọ chọpụtara na mbuso agha nke ndị ọzụzụ atụrụ na ndị ohi, ndị omekome na ndị ohi na mpaghara ndịda nke mba ahụ ewetawo ihe ịma aka nchebe siri ike nke na ụmụ amaala enweghị ike ibi ndụ ha nkịtị, gụnyere ịchụso ọtụtụ ọrụ na-arụpụta ihe, na-eduga egwu maka nri na nchekwa izugbe.
N'ihi nke a, nzukọ ahụ kpebiri na amachibidoro ịta ahịhịa ehi n'ofe Southern Nigeria. Ndị gọvanọ kwuru na mmepe na mmụba ọnụ ọgụgụ mmadụ etinyela nrụgide na ala dịnụ ma mee ka atụmanya nke esemokwu dị n'etiti ndị na-azụ anụ na-akwaga na ndị bi na South mụbaa.
“N’iburu ọnọdụ a, ọ dị oke mkpa ịmanye mmachibido iwu igbochi nri na South (gụnyere ijegharị ehi na mpaghara ndịda site na ụkwụ); kwadoro na Gọọmentị etiti kwesịrị ịkwado steeti dị njikere ịzụlite usoro nlekọta anụ ụlọ ndị ọzọ na nke oge a.
Kpọọ maka nwughari
“Ndị gọvanọ kwetara na ọganihu nke mba ahụ chọrọ ka e mee ngwa ngwa na nkwuwa okwu iji dozigharịa gọọmentị Nigeria, na-eduga na mgbanwe nke ndị uwe ojii steeti, nyochaa ụzọ e si ekenye ego na-akwado ndị ọchịchị okpuru ọchịchị na imepụta ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke na-akwado nkwado anyị na itinye aka nke usoro ọchịchị etiti.
“Akwadoro na ebe ọ bụ na esemokwu dị iche iche n’etiti ndị dị iche iche maka itinyekwu aka na nhazi ọchịchị dị ugbu a, Gọọmentị etiti kwesịrị ịkpọ mkparịta ụka mba dị ka ngwa ngwa.
“Ndị gọvanọ tụrụ aro na n’ịghọta nghọta nke ndị anyị dị iche iche, ọ dị mkpa inyocha nhọpụta na ụlọ ọrụ gọọmentị etiti (gụnyere ụlọ ọrụ nchekwa) iji gosipụta agwa gọọmenti etiti ka ọnụọgụgụ ndị Naịjirịa niile bi na heterogen.
“Ekpebisiri ike ịzụlite mmekọrịta n'etiti steeti ndịda na mba n’ozuzu; gosipụtara nchegbu na gridlock gara n'ihu na Oshodi- Apapa Expressway na chokehold o tinyego ya na aku na uba obodo, obu uzo nke si Apapa Wharf.
'Mee ọ rụọ ọrụ ọdụ ụgbọ mmiri na ndị ọzọ na-ekwu '
“Ya mere, nzukọ ahụ tụrụ aro ka ịmalite ma guzobe ọdụ ụgbọ mmiri na steeti ndị ọzọ nke gọọmentị etiti iji mepụta ọrụ ọhụrụ ma kwalite ọrụ mmekọrịta akụ na ụba na mba ahụ.
Nzukọ ahụ gosipụtara nchegbu banyere mmetụta akụ na ụba nke onye ọzọ mkpọchi na mba ahụ, ya mere, tụrụ aro ka nhazi na mmekorita dị ukwuu n'etiti gọọmentị etiti na nke steeti wee nwee usoro aghụghọ maka etu ọrịa a na-efe.
“O gosipụtara nchegbu miri emi banyere ihe ịma aka nchebe na-emetụta mba a ugbu a ma gbaa ume na Maazị Onye isi ala na-agwa ndị Naijiria okwu banyere ihe ịma aka nke enweghị nchebe ma weghachite obi ike nke ndị anyị. Nzukọ ahụ gosipụtara ekele nye onye ọbịa anyị, Gọvanọ Ifeanyi Okowa, maka mmesapụ aka ya na nnabata ya.
Ndị ọrịa COVID-19 na-arịa ọrịa nke na-eme ka ire ha gbasaa ruo n'ókè nke na ha enweghị ike ikwu okwu ma ọ bụ rie nri (Foto) Nwere ike 22, 2021
Akeredolu gbara Malami ume ka ọ gbaa ndị gọvanọ ndịda ugwu akwụkwọ maka mmachi ịta ahịhịa Nwere ike 20, 2021
Ndị gọvanọ ndịda ọwụwa anyanwụ na ndị isi na-ekwusi ike na Ebube Agu maka nchebe April 26, 2021
Ka a na-egbu ndị Naịjirịa iri abụọ na otu, ndị gọvanọ na-ebe akwa ma na-achọ ka Buhari tinye aka April 28, 2021
Ndị gọvanọ kwenyere itinye ego obodo kwụụrụ onwe ya maka ndị ọka ikpe, ndị omeiwu April 20, 2021
Hapu ESN ma tinye uche gi na Ebubeagu, Orji gwara ndi ochichi South East April 25, 2021
'Kedu otu ndị gọvanọ gara aga na ndị ọzọ si zụta ụlọ 800 nke Dubai' April 28, 2021
N380 / lita: Ndị gọvanọ enweghị ikike ịtọ ọnụ mmanụ ụgbọala —Falana Nwere ike 22, 2021
Tags:akeredolu, apa, akpapa wharf, ayade, babajide akwụ-olu, bayelsa, ben ayade, dapo abiodun, douye diri, ebonyi, fayemi, agwa gọọmenti etiti, fg, gboyega oyetola, godwin, Godwin obaseki, gọvanọ willie obiano, ibom, ifeanyi okowa, ifeanyi ugwuanyi, ikpeazu, na echiche, kayode fayemi, mkpọchi, makende